နည်းပညာ လေ့လာနည်း - လူတိုင်းဖတ်သင့်သည်
← Blog မှာ blog မှာ facebook like and share button ထည့်နည်း အင်တာနက် (မရှိမှ) ဆော့လို့ရမယ့် Google Chrome ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဂိမ်း →
29 thoughts on “နညျးပညာ လလေ့ာနညျး”
မင်္ဂလာပါအစ်ကိုရေ သမီးကတော့ ၀ါဝါလှိုင်ပါ ညီမလေးမသိတားလေးတွေရှိလို့မေးခွင့် ပြုပါနော် အဲဒီပညာကိုရှာနေတာ နှစ်နဲ့ချီလာပြီ ရှိသမျှမြန်မာ it helper တွေလဲကုန်တော့ပါမယ် အင်္ဂလိပ်စာသိပ်မကျွှမ်းတော့ တော်တော့်ကိုခက်နေပါတယ်
ခုလဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က websit နဲ့ပတ်သတ်ရင် အစ်ကိုတစ်ယောက်တော့သူအကူညီတောင်းနေကျရှိတယ်ဆိုလို ဒီနေရာလေးကိုယောက်လာတာပါ သမီး က
html နဲ့ css စိတ်ဝင်စားလို့ web တွေလုပ်ရတာကြီုက်လို့
သင်တန်းတက်ထားပါတယ် ဒါပေမယ် သင်တန်းကပြီးသာပြီးသွားတယ် home page
နဲ့ နဲနဲပါးပါး updat လုပ် လို့ရတဲ့ web လေး တွေပဲ ပြီးသွားပါတယ် အမြဲတမ်း လိုလို up date လုပ်နေရတဲ့ websit လုပ်နည်းလေးအရိပ်အမွတ်လောက်သိချင်ပါတယ် အဲဒီလိုအမြဲတမ်းအပ်ဒိတ်လုပ်နည်းနဲ့ label တွေဘာတွေခွဲ တာ numbered page navigation လုပ်နည်းတွေပါသိချင်ပါတယ်နော် အဲဒါကို လိုက်မေးနေတာ တော်တော်ကျာနေပါပြီ ကိုယ်ဘာသာလဲစမ်းလုပ်ကြည်တယ်မရဘူးဖြစ်နေတယ် webmaster အစ်ကိုတွေ အမတွေကိုလိုက်မေးတော့လဲမပြောပြချင်တာလားး မပြောပြတက်တာလားပြောတာကိုပနြားမရျင်းလို့လားမသိဘူး blogger တို့ wordpress တိုကိုပဲညွှန်းပါတယ် အဲဒါတွေကကောင်းပါတယ် blogger ဆို တော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ် ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါ ကသူ့မူပိုင်ရှိပြီးသားတွေ ရှင်းရှင်းပြောရရင် blogger ကပေးတဲ့ ဘလော့ တစ်ခုကို ကိုယ်ပိုင် host နဲ့လုပ်ချင်တာမျိုးပါ ကိုယ်ယူထားတဲ့ hosting ကနော web တစ်ခုကိုလွှင့်လိုက်မယ် ပြီးရင်အဲဒီ web ကို ဘလော့တစ်ခုလိုပဲ ပြင်လို့ဆင်လို့ update လုပ်လို့ရချင်တာပါ အခု သင်တန်းကသင်ပေးလိုက်တာက page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးဖို့ .html တို့ .php တို့နဲ့ ကူးတာမျိုးပဲသင်ပေးပါတယ်
်ူfolder လိုက်ချပြပြီး https://www.myanmarwebdesigner.com/blog/category/android အဲလိုလေဘယ်ခွဲချင်တာမျိုးပါ အဲဒီ လေဘယ် ထဲမှာ ပိုစ် တွေပါချင်သလောက်ပါမယ် များလာရင် order post အော်တိုလုပ်ပေးသွားတာမျိုးပါ နဲနဲရှည်သွားပါတယ်နော် အစ်ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် အဲဒီပညာရှာနေတာ အတန်းတွေလဲပျက် ခေါင်းတွေလဲမူးးး နဲ့အလကားနေ လိုင်းပေါ်ရောက်နေလို့မေမေ့အဆူခံလဲနေ့တိုင်းထိပါတယ် အမြဲတမ်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် web လုပ်တဲ့လူတွေလဲများများလာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် တကယ်မသိလို့မေးတာပါဖြစ်နိုင်ရင်ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်
ဒီ blog ကိုလည်း wordpress နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ WordPress မှာ ညီမအခုပြောတဲ့ functions တွေ အကုန်ပါပါတယ်။ သေချာ အတွင်းကျကျလေ့လောဖို့ပဲ လိုတာပါ။ အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ဘာမှမသိသေးခင်မှာ မဆုံးဖြတ်တာပါပဲ။ အခု ညီမဖြစ်နေတာက wordpress တို့ blogger တို့ကို ညီမလိုချင်တာနဲ့ အဆင်မပြေဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် သေချာ လေ့လာဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ မလေ့လာရသေးဘဲနဲ့ သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး သေသေချာချာလေ့လာလိုက်ပါ။ လေ့လာရင်းလုပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအခါကျရင် ကိုယ်တိုင်များများလေ့လာပါ။ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရ၊ ဘယ်လိုမှ အွန်လိုင်းမှာ ရှာလို့မရဘူးဆိုမှ အကူအညီတောင်းပြီး မေးကြည့်ပါ။ WordPress ရော၊ Blogger မှာပါ ညီမလိုချင်တာတွေ အားလုံးရှိနေပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့က အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် website ရေးနည်းသင်ချင်လို့ youtube ပေါ်မှာလိုက်ရှာတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတွေချည်း ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်အဆင်မပြေဘူးဗျား။ ဒါကြောင့်မြန်မာလိုများရှိမလားမသိ ဆိုပြီးရှာကြည့်တော့ Myanmar Web Designer ကတင်ပေးထားထဲ Web site ရေးနည်းလေကို တွေတော့ တကယ်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ပီတိလည်းဖြစ်မိပါတယ်။ အားနည်းချက်လို့တော့ပြောလို့ရမလားတော့မသိဘူးဗျား..ကျွန်တော့်မွေးရပ်မြေက ကျေးတောရွာတစ်ခုပါ မိသားစုအဆင်ပြေရေးအတွက် ထိုင်းကိုရောက်လာတာပါ။ အတန်းပညာကလည်းနည်းပြီး ဘာသင်တန်းမှလည်း မတက်ဘူးပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ယုံကြည်နေမိတယ် “ကျွန်တော်လေ့လာတတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်လို့”။ ဒီနေ့ website ကိုတွေ့ရတာလည်းကျွန်တော်အရမ်းပဲဝမ်းသာသွားမိတယ်.. ကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အချိန်ပေးပြီး ပုံမှန်လေ့လာရင် ရပါတယ်။ အချိန်မပေးနိုင်တာတို့၊ ပုံမှန်မလုပ်နိုင်တာတို့ဆိုရင်တော့ မရပါဘူး။
S Khuppi says:
ကျ​တော်​ အစ်​ကို့စာကိုဖတ်​ပြီးအရမ်းအားရှိသွားတာဘဲ ကျ​တော်​ Networking ပိုင်းကိုစိတ်​ဝင်​စားလို့ ​လေ့လာ​နေပါတယ်​။ ဒီလို​လေ့လာတဲ့​နေရာမှာကျ​တော်​အခက်​​တွေ့တာနည်းနည်းရှိပါတယ်​။ ကျ​တော်​ မိသားစုအခက်​ခဲ​ကြောင့်​ဘယ်​သင်​တန်းမှလဲ မတတ်​ဖူးဘူး။ online ​ပေါ်က Networking စာအုပ်​​တွေကို pdf file နဲ့ ဖတ်​​နေရပါတယ်​ (စာအုပ်​မဝယ်​နိုင်​လို့) သင်​တန်းမတတ်​ဖူးဘူး ရှင်းပြတယ်​ဆို​တာလဲမရှိ​တော့ စာဖတ်​ရုံနဲ့ ကျ​တော့်​ကိုကျ​တော်​မလုံ​လောက်​ဘူးလို့ထင်​​နေပါတယ်​။ အဲဒါ သင်​တန်းကိုဘယ်​လိုတတ်​ရမလဲမသိလို့ပါ။ ​ပြောပြ​ပေးလို့ရမလား?
သင်တန်းတော့ ကျွန်တော် မပြောပြတတ်ပါဘူး။ Networking လေ့လာနေတယ်ဆိုရင်၊ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်က Networking နယ်ပယ်ထဲကို ရောက်နေရပါတယ်။ ရောက်အောင်လုပ်ရမှာက ကိုယ့်တာဝန်ပါ။
အပေါ်က အချက်တွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နံပါတ် ၂ အချက်ကို ပယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမတတ်ဘဲ အလုပ်ဝင်လို့တော့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တိုက်ရိုက်ဝင်လို့မရပေမယ့် နီးစပ်တဲ့နေရာကိုတော့ သွားလို့ရပါတယ်။ အနည်းဆုံး ကွန်ပျူတာသုံးတတ်ရင် အင်တာနက်ဆိုင်လောက်တော့ အလုပ်လျှောက်လို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ဘာလို့ရွေးရလည်းဆိုတော့၊ လေ့လာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လို့ပါ။ အင်တာနက် အချိန်ပြည့်သုံးနိုင်တဲ့အတွက် လိုချင်တာ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ computer တွေရှိတဲ့အတွက်
၁။ စက်ပျက်ရင် ပြင်ခွင့် (သို့) ပြင်တာကို ကြည့်ခွင့် ရနိုင်ပါတယ်။
၂။ Networking လက်တွေ့ လေ့လာလို့ရပါတယ်။
၃။ Online ကနေ စာတွေ့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၄။ လစာရပါမယ် (လစာစုပြီး သင်တန်းတက်နိုင်ပါတယ်၊ သင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ သေချာ စုံစမ်းပြီး တက်ပါ။)
အဲဒါတွေအပြင် တစ်ခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီအချက်တွေမရတဲ့ဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
အကို ကျွန်တော်programming ရေးတတ်ချင်တယ်c++စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ် ဒါပေမယ့် သင်္ကေတတွေရဲ့သဘောတရားကိုသိပ်နားမလည်ဘူး။နားလည်အောင်ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးတွေဖတ်ရမလဲ အကို၊ကျေးဇူးပြုပြီးညွှန်ကြားပေးပါလား
Webmaster တယောက်ဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ် web ပိုင်းမှာတော်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ် web design တို့ web,developmentတို့ပါဘာတွေလိုအပ်သလဲ ဘာသင်တန်းတွေတတ်ရမလဲ ခင်ဗျ
ကျောင်းမှာတော့ Html တွေ css တွေအခြေခံသင်ထားလို့နားလည်ပါတယ် လမ်းညွှန်ပေးရင် အရမ်းကျေးဇူးတင်မိမှာပါ
အရမျးကောငျးပါတယျ အခုလိုမြိုးအခွခေံသိသငျ့တာတှကေို အတှအေ့ကွုံနဲ့ ယှဉျပွီးရှငျးပွထားတာ။ ကြှနျတေျာ့အထငျပွောရရငျ နညျးပညာစိတျဝငျစားတဲ့ မွနျမာလူငယျတှေ resource ရှာတဲ့နရောမှာအားနညျးနကွေသလားပဲ။ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ လူတှကေလမျးပွပေးနိုငျရငျတော့ ကောငျးပါမယျ။
ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ပါ ပညာမစုံသေးလို့
သင်တန်းတက်ချင်သေးတယ် ရန်ကုန်မှာ ဘယ်ဆိုင်အဆင်ပြေမလဲ
Pan Lay Nyinn says:
အခု Graphic Designer အလုပ်ကိုလုပ်နေပါတယ်.
အစ်ကိုပြောထားတဲ့ အချက်(၅)ချက်ထဲက (၃)ချက်ထိရောက်နေပါပြီ
(၄)နဲ့(၅)ကတော့ ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ အစ်ကို့ရဲ့ပိုစ်ကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် အားအင်တွေ ပိုရှိလာပြီး အရင်ကထက် ပိုလေ့လာဖို့လိုနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိလိုက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
မိမိရဲ့ ပညာဗဟုသုတတွေကို မျှဝေပေးတဲ့ အစ်ကိုလည်း လုပ်ငန်းတွေ ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ။ အိုင်တီပညာတွေလည်း ဒီထက်မက တိုးတက်ပါစေရှင့်။
ဆရာ့ ရဲ့ သင်ကြားတဲ့နည်းပညာက
ရိုးရှင်းတယ် နားလည်ရတာလွယ်ကူတယ် သိပ်ပီူတော့လဲ အခက်ခဲမရှိဘူး
ကျွန်တော်က အသက် 17ပါ
IT ပိုင်းကို ကလေးဘဝထဲကစိတ်ဝင်စားတာ IT ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာမူနဲ့
ဆရာ့လို အသေးစိတ် နားလည်အောင်ရှင်းပြတဲ့
Ye Naing Kyaw says:
ကျနော့ facebook page မှာ ပြန်လည်တင်ခွင့်ပြုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ကနြျောတို့ သငျယူခငျြတဲ့ ဘာသာရပျတှကေို google playstore မှာ ရှာယူပွီး လေ့ လာနိုငျပါတယျ ….
ဥပမာ web page advance couse, html,hacker,app
ဖုန်းနည်းပညာ လေ့လာချင်တယ် ဆရာ
ဆရာပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်းကို ပြန်ပြီးခြေရာခံလို့ရနိုင်မလဲဆရာ
Ashin kavisâra says:
Digital Sketching(Graphic Design)grphic designing is IT. don’t be
ကနြျော ထိုငျးကို နာဂဈတုနျးက ရောကျတာပါ အာ့တော့မှ ကှနျပွူတာကိုမွငျဖူးတာဗြ
ကှနျပွူတာကို အငျတာနကျလို့ ထငျခဲ့ဖူးတယျ ။ရတဲ့ လစာလေးနဲ့ ကှနျပွူတာတဈလုံး ဝယျလိုကျတယျ အကွှေးနဲ့ပေါ့ Disk-C ထဲက ဘာမှဖှငျ့မရတဲ့ ဖိုငျတှကေို ဖကျြဖူးတယျ
Storage အလကားကုနျတယျဆိုပီးတော့။Window 7ပေါ့ဗြာ မွနျမာစာ ဇျောဂြီတခါသှငျးရငျ
ဘတျ နှဈရာ ပေးခဲ့ရတယျဗြာ၊
ခုတော့ …..Hardware A+ , Networking ,ကိုလလေ့ာရငျးနဲ့ Company တခုမှာအလုပျရနပေါပီ။ခုလို online မှာ လလေ့ာနိုငျဖို့ တတျနိုငျသမြှ ကူညီနကွေသူ ဘယျသူမဆို ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောခငျြပါတယျဗြာ။ဆကျလကျ ပီးလညျးလလေ့ာနဆေဲပါဗြ
တခြိနျက Disk-C :အမှိုကျပုံးထဲထညျ့ဖူးသူ…